FISEMA: tsy manam-bola ve ny fitondrana sa ny fandaminana no tsy lavorary ? | NewsMada
Tsy mira zotra amin’ny fandaharanasan’ny governemanta amin’ny tetikasa lazaina manara-penitra ny fiainan’ny mpiasa malagasy mpamokatra, araka ny fanambaran’ny Fisema (Fivondronan’ny Sendika eto Madagasikara). Tsy misy tsy mikaikaika ny rehetra manoloana ny fahefa-mividy mitotongana. Tsy maharakotra ny filana fotra intsony, toy ny sakafo, ny fitafiana, ny fianaran’ny mpianatra, indrindra raha sanatria marary ny fidiram-bola isan-tokantrano.
Mitombo hatrany ireo mpiasa tsy mandray karama feno, na efa amam-bolana maro tsy mandray karama, na very asa mihitsy. Hita izany any amin’ireo orinasam-panjakanana, ireo sampan-draharaha sahanin’ny fanjakana, toy ny mahazo ny mpiasan’ny oniversite, kaominina maromaro manerana ny Nosy, tambin-karaman’ny mpampianatra Fram, sns. Misy ihany koa ireo tokony handray fisotroan-dronono nefa mbola tsy misitraka izany, noho tsy fahaloavan’ireo sampan-draharaha niasany ny latsakemboka.
Mampametra-panontaniana izany rehetra izany, hoe tsy manam-bola ve ny fitondrana sa ny fandaminana no tsy lavorary? Mijaly ny mpiasa, efa latsaka anaty fahantrana lalina. Manampy trotraka, hoy ny Fisema, ny fanararaotam-pahefana, ny tsy fanajana ny zon’ny mpiasa ataon’ireo mpampiasa sasany. Mandry tsy lavoloha ny ankamaroan’ny olona na antanàn-dehibe na any ambanivohitra noho ny tsy fandriampahalemana, ny tebiteby manoloana ny aretina Covid-19, sy ny vesatry ny fahantrana.
Amin’ny maha mpikambana an’i Madagasikara ao amin’ny OIT (Organisation Internationale du Travail) nisy fanambarana nataony ny volana jona 2019, tamin’ny faha-100 taonany momba ny ho avin’ny Asa, ary koa fanambarana natao tany Abidjan, mametraka ny mpiasa ho ivon’ny fampandrosoana.